Ngaba ungumdlali olungileyo? Umkhosi Womoya waseBritane unokukuqesha | Iindaba zeGajethi
Ngaba ungumdlali olungileyo? Umkhosi Womoya waseBritane unokukuqesha
Sikwixesha leedrones, kwaye umbono uya usanda wokuba amadabi exesha elizayo aya kulwelwa kwi-cockpits, kude kakhulu nendawo eyingozi yokulwa. Umkhosi Womoya wase-Bhritane yenye yezona ndawo zibalulekileyo emhlabeni, kwaye inokuba kungenjalo njani, kudala besebenza kunye needroni kwizikhundla zabo. Nangona kunjalo, umphathi-misebenzi ovela I-Royal Air Force ibeka izinto zayo kubadlali bebhola njengexesha elizayo "abaqhubi beenqwelo moya" zeedrones ezihlala esibhakabhakeni seendawo zongquzulwano.
Njengoko sifundile Gizmodo, UMarshal Greg Bagwel ngumphathi ophethe olu hlobo lomsebenzi, kwaye ngokweengxelo zakhe zamva nje, uxinzelelo lokuqhuba iinqwelomoya ezingenamntu kangangezihlandlo ezininzi zingadlula kweenqwelomoya, zibangele iingxaki zoxinzelelo kunye nezifo ezivela kubo kwabo baphetheyo. yokuthatha ulawulo lweedrones kwindawo yokulwa. Ke ngoko, eBaneengxaki ezinzulu ngokubhekisele kubasebenzi abaphethe lo msebenzi, owahlukileyo kwaye ubalulekile.
Kufuneka sivavanye kwaye siqwalasele abaneminyaka eyi-18 okanye eyi-19 njengabaqhubi beedrone, sibakhuphe egumbini labo kwaye kude nePlayStation ukuze basebenzise amava abo kulawulo lwedrone. Siza kuthi kubo: 'ewe, awuzange ubhabhe enye yezi, kodwa ayinamsebenzi loo nto kuba siyazi ukuba ungayenza.'
Inkumanda ikholelwa ekubeni ezi zixhobo ziya kuba yinto ebalulekileyo kwixesha elizayo. I-Gamers isetyenziselwa ukuchitha iiyure ezininzi phambi kwescreen sokuvavanya zonke iintlobo zezixhobo, ngokuchanekileyo kufanelekile. Nangona kunjalo, kusengqiqweni ukuba kwijoni eliqaqadekileyo, imeko enxunguphalisayo iyenziwa xa emva kweminyaka emininzi yokuzilolonga kunye nokulungiselela, baphela behleli kwisitulo sedesika phambi kwendlala kunye nescreen.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ngaba ungumdlali olungileyo? Umkhosi Womoya waseBritane unokukuqesha
Patroni elungileyo sitsho
Ngaba ungathanda ukuthatha inxaxheba kwiimvavanyo njengomnxibelelanisi nommeli?
Phendula u-Fair Patroni
Isiphequluli seSurfy sisikhangeli sewebhu esitsha, esijikeleziweyo nesimahla
I-Spotify iceba ukutshintsha ukhetho lomculo lwabasebenzisi "basimahla"